Tag: ụgwọ ọrụ dragon | Martech Zone
Tag: ụgwọ ọrụ dragon
Dragongwọ Ọrụ Dragongwọ Ọrụ: Mee Ka Nyocha Gị Na Okwu Ọnụ Ahịa
Imirikiti obere ụlọ ọrụ kwenyere na ihe karịrị ọkara azụmaahịa ha sitere na ndị na-ezo aka, mana 80% kwetara na ha enweghị usoro iji wepụta ndị na-ezo aka. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime 80%, ị naghị eji usoro azụmaahịa nke nwere otu mgbanwe ntụgharị kachasị elu nke usoro ọ bụla. Onyinye Dragongwọ Ọrụ bụ ikpo okwu maka azụmaahịa mpaghara. Ọ bụ ka obere azụmaahịa siri ike na mmemme ha na-ezo aka na-aba ụba ahịa. Onyinye Dragongwọ Ọrụ pụrụ iche na-ejikọta nkwupụta ndị ahịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya,